Umdla we-imeyile onomdla > UVielhuber uDavid
Umdla we-imeyile onomdla09
Ngaba amagama e-domain kunye needilesi ze-imeyile zihlala zihlala zingaphantsi ukuqinisekisa ukuba ufika apho ufuna ukuya khona? Okanye ngaba oku akunamsebenzi kwaphela? Umzekelo, iiseva zeposi zikaGoogle zinezicwangciso ezingaqhelekanga ezineziphumo ezinomdla, endiza kuthi ndizise ngokufutshane kwinqaku elilandelayo.
UGoogle, osandula ukuqalisa ukunikela ngeedilesi ze-gmail.com kubasebenzisi baseJamani, uhoya amaxesha aphambi kwezibiyeli kwaye upelo alunamsebenzi. Ezi dilesi ze-imeyile zilandelayo ke zilingana ngokupheleleyo:
Umgangatho weRFC 2821 ucacisa ukuba le ndlela kufanele ukuba iphathwe njani:
Oku kuthetha ukuba igama lethambeka elingasemva kwenkawu ye-bracket li-case -ensensitive kwaye icandelo lendawo ngaphambi kokuba inkawu ye-bracket i-case-sensitive. Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, iiseva zeposi ziyanyamezeleka. Ndikucebisa ukuba uhlala ubhala zombini iidilesi ze-imeyile kunye namagama wesizinda kwimeko encinci.
Icala elincinci elingezantsi: Unokongeza idilesi eyongezelelweyo ngokuthe ngqo phambi kwe @, eya kuthi ingahoywa ngexesha lokuhanjiswa (kwaye ke isetyenziswe, umzekelo, ukucoca umthetho we-imeyile):